Dagaal Yahano Katirsan Al-shabaab Ayaa weerar Kuqaaday Saldhigyo kuyaalo Kenya. – STAR FM SOMALIA
Dowladda Kenya ayaa sheegtay in ciidamo ka tirsan Al-Shabaab ay xalay dab qabad siiyeen laba saldhig Boolis oo ku yaalla deegaanka Ijara ee Waqooyi Bari Kenya.
Saraakiil ka tirsan Ciidanka ammaanka Kenya ayaa sheegay in sidoo kale Shabaab ay gubeen Anteeno ay lahayd Shirkadda Isgaarsiinta ee Safaricom.
Mas’uuliyiintu waxa ay sheegeen in uusan khasaare nafeed ka dhalan weerarkii xalay ka dhacay Ijaara oo dhacda duleedka Gaarisa, laakiin ay gubeen Saldhigyadaasi.
Waxa ay xuseen in Ciidamada Al-Shabab ee weerarka gaystay ay u baxsadeen deegaanka Boni oo saldhigga ugu weyn ay ku leeyihiin Al-shabaab.
Waxaa kale oo ay xaqiijiyeen in Ciidamo badan oo Milatari ah loo daabulay deegaankaas si ay uga hortagaan weerarrada dheeraadka ah ee Al-shabaab ay ka geysanayaan Gobolka.